Myanmar famous actor, model boy, Naing Naing and his wife, Sandi Cho | Myanmar Celebrity Couple Photos
Myanmar famous actor, model boy, Naing Naing and his wife, Sandi Cho
Naing Naing is the Myanmar famous actor and model boy. He entered asanew actor in 1997 and he is getting popular in 2004. He got married to Sandi Cho who is studying at New York and her family is aslo setteling down in New York, American. When they got married, Sandi Cho is only just 18 years old. Naing Naing has also moved to New York with his lovely wife. We hardly see him again on coming Myanmar Videos and films.
Myanmar popoular actor, Naing Naing and his lovely wife, Sandi Cho
Myanmar actor, Naing Naing on his wedding day
Myanmar actor, Naing Naing, his wife Sandi Cho and their families
၁၉၇၈ ခုနစ် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့မှာ တင်ဇော်လတ် (နိုင်းနိုင်း) ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်... ၁၉၉၆ ခုနစ်မှာ တင်ဇော်လတ် ဟာ မော်ဒယ်ဘ၀ ဆိုတဲ့ အနုပညာ လမ်းကြောင်းလေးကို စတင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ ခုနစ်မှာတော့ စနှိုးဝှိုက်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှာ သရုပ်ဆောင်ပညာကို ဆည်းပူးခဲ့ပြီး နိုင်းနိုင်းဆိုတဲ့ နာမည်လေးနဲ့ သူ့အနုပညာတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်....ရုပ်ရှင် ၊ ဗွီဒီယို သရုပ်ဆောင် နိုင်းနိုင်း နှင့် သူ၏ဇနီး စန္ဒီချို တို့ဟာ ၉.၁.၂၀၀၈ မှာ 74/C သံလွင်လမ်း တွင် ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိကအား မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေး အလှူဒါန ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပြီး ထူးခြားမှုတစ်ခုက ၉.၁.၂၀၀၈ ရက်နေ့ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်မြို့မှာ မိဘများနဲ့ နေထိုင်ကျောင်းတက်နေတဲ့ စန္ဒီချိုလေးရဲ့ ၁၈ နှစ်မြောက်မွေးနေ့လို့လဲ သိရပါတယ်။ ၁၂.၁.၂၀၀၈ မှာတော့ Sedona Hotel Wedding Reception မှာ မနက် ၉နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အနုပညာရှင် ညီအကိုမောင်နှမများစွာ ပျော်ရွှင်စွာ တက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ Dinner Party ကိုတော့ Dolphin Restaurant မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ညနေ ၆ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီ အထိ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။